Free Fire လုံခြုံရေးမေးခွန်းများ
FREE FIRE - မိဘနှင့်အုပ်ထိန်းသူများအတွက်သတင်းအချက်လက်
ကျွန်ုပ်တို့၏မူဝါဒများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းများသည် Free Fire ကစားသူများအားလုံးအတွက်အပြု
လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များပေးရန်နှင့်၎င်းတို့၏ကလေးများအား Free Fire တွင်လုံခြုံပြီးပျော်စရာ
အခြားအချက်အလက်များအတွက်, ကျေးဇူးပြုပြီးအောက်ပါမေးခွန်း သို့ ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းများ နှင့် သီးသန့်မူဝါဒ.
Free Fire ဆိုတာဘာလဲ?
• Free Fire သည်အွန်လိုင်း, မိုဘိုင်းလ်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်သည့်ဂိမ်းဖြစ်ပြီးကစားသမားများအားပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောလူမှုရေးအတွေ့အကြုံကိုပေးစွမ်းနိုင်ရန်ဖန်တီးခြင်းဖြစ်သည်။
• ဂိမ်းရဲ့အကျဉ်းချုံးကိုဤ ဗီဒီယို တွင်ကြည့်နိုင်သည်
Free Fire ကိုဘယ်မှာ Download လို့ရလဲ?
အောက်ပါနေရာများတွင် Free Fire ကို Download နိုင်ပါသည်:
• iOS - App Store တွင်ရရှိနိုင်ပါပြီ
• Android - Google Play တွင်ရရှိနိုင်ပါပြီ
• ကစားသူသည်ကစားရင်းဂိမ်းတွင်းငွေကြေးနှင့်ဂိမ်းနစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ရန်လက်နက်များရနိုင်မည်။ ဂိမ်းဇာတ်ကောင်နှင့်ပစ္စည်းများဝယ်ယူနိုင်မည်။
• ကစားသူသည်စိန်ကိုလည်းငွေသားအစစ်နှင့်ဝယ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်လည်း ဂိမ်း၏ဇာတ်ကောင်နှင့်ပစ္စည်းများဝယ်ရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Free Fire ကကလေးတွေကစားလို့လုံခြုံရဲ့လား?
• ကျွန်ုပ်တို့သည် Free Fire ကစားသမားအားလုံးအတွက်ကောင်းမွန်သော၊လုံခြုံစိတ်ချရသောအတွေ့အကြုံများကိုပေးအပ်ရန်ကတိပြုထားပါသည်။
• ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းဖော်ပြချက်အတိုင်း အသက်မပြည့်သေးသောကစားသမားအများစု (ကလေး / ကလေးများ) သည်ဂိမ်းကစားရန်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုမှီ မိဘ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်းခံရန်လိုအပ်သည်။ သင်သည် မိဘသို့ အုပ်ထိန်းသူဖြစ်ပြီး သင်၏ကလေးအစားအကောင့်ဖွင့်လျှင်သင်သည်လည်းဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းကိုမတင်ခင်သဘောတူရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ကလေးအား Free Fire တွင်မည်သူစကားပြောနိုင်သနည်း?
• Free Fire ၏ချက်တင်အင်္ဂါရပ်သည်ကစားသမားများအကြားစကားစမြည်များတိုးပွားလာစေရန်နှင့်အသိုင်းအဝိုင်းစိတ်ဓာတ်ကိုတည်ဆောက်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
• Free Fire ကစားသူများသည်သူတို့၏သူငယ်ချင်းများစာရင်းတွင်ထည့်သွင်းထားသည့်အခြားကစားသမားများနှင့်ဂိမ်းကစားစဉ်တွင်ဆက်သွယ်ရန်စကားပြောဆိုနိုင်သည်။
• ကျေးဇူးပြု၍ သင်၌တာဝန်ရှိသောအရွယ်မရောက်သေးသူမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ သို့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် နှင့် မည်သူမည်ဝါကိုမျှ မမျှဝေပါနှင့် ဝှက်စာများ (သို့) လော့အင်အချက်အလက်ကို မည်သူမည်ဝါကိုမျှမည်သည့်အခါမျှမဝေမျှရန်မှာကြားပါ။
ကျွန်ုပ်၏ကလေး Free Fire ကစားဖို့လိုအပ်ချက်ကဘာတွေလဲ?
• ကစားသူရှိရမည့်အနည်းဆုံးအသက်သည် မိမိနိုင်ငံအတွက် Google Play နှင့် App Store သတ်မှတ်ချက်ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ နိုင်ငံအများစုတွင် Free Fire ကစားရန်အသက်သည် 12 နှစ်ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်အချက်လက်များသိရ်ှလိုပါက App Store သို့ Google Play သို့ဆက်သွယ်ပါ။
• မည်သို့ပင်ဆိုစေကျွန်ုပ်တို့၏၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအသက် ၁၈ နှစ်မပြည့်သေးသောကစားသမားများသည်ဂိမ်းကစားရန်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုမှီ မိဘသဘောတူညီချက်ရယူရန်လိုအပ်သည်။ သင်သည်သင်၏မိဘကိုယ်စားအုပ်ထိန်းသူတစ်ဦးဖြစ်လျှင်အကောင့်တစ်ခုမတင်မှီ ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များကိုသဘောတူရန်လည်းလိုအပ်သည်။
• ထို့အပြင် အကယ်၍ သင့်ကလေးသည်အရွယ်မရောက်သေးသူဖြစ်ပြီးသူတို့၏ဒေတာများစီမံဆောင်ရွက်ခြင်းကိုသင်သဘောမတူပါကကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်မူဝါဒ၌ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာကာကွယ်ရေးအရာရှိထံသို့ဆက်သွယ်ပါ။
• သင့်ကလေး၏အကောင့်လုံလုံခြုံခြုံနှင့်သီးသန့်ထားရှိပါ. သင်၏ကလေးအကောင့်ကိုအခြားသူအားဝင်ရောက်ခွင့်မပေးပါနှင့်။
• မိဘများခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသူတို့၏ကလေးအမည်များ၊ လိပ်စာများ၊ ဖုန်းနံပါတ်များ (သို့) အခြားကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအားဘယ်တော့မှထုတ်မပြောရန်မိဘများအားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းသည်။သင်၏ကလေး၏အသုံးပြုသူ ID နှင့်/သို့မဟုတ်စကားဝှက်ကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအသုံးပြုခြင်းကိုချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါ။
• in-app စီရင်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်, ကျွန်ုပ်တို့မီဒီယာပလက်ဖောင်း သို့ အသေးစိတ်ကို ထောက်ပံ့စာမျက်နှာ သို့ပေးပို့နိုင်သည်.
• ထို့အပြင် အကယ်၍ သင့်ကလေးသည်အသက်အရွယ်အားဖြင့်အများစုဖြစ်ပြီးသူတို့၏ဒေတာများစီမံဆောင်ရွက်ခြင်းကိုသင်သဘောမတူပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒ၌ဖော်ပြထားသည့် သီးသန့်မူဝါဒ အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာကာကွယ်ရေးအရာရှိထံသို့ဆက်သွယ်ပါ။
ကျွန်ုပ်ကလေးသည် Free Fire ကစားနေသည်၊ သို့သော်အသက်မပြည့်သေးပါ၊ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်သင့်သနည်း ?
• အကယ်၍ သင့်၏အုပ်ထိန်းမှုအောက်မှာရှိနေသောကလေးသည် အသက်အရွယ်မပြည့်ဘဲ (သို့) ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ Free Fire ကစားနေသည်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ ထောက်ပံ့စာမျက်နှာ သို့ဆက်စပ်သောအသေးစိတ်နှင့်ဆက်သွယ်ပါ. ပိုမိုသောအသက်ရွယ်ကန့်သတ်ချက်အတွက်, ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ဆောင်မှုစာမျက်နှာကိုဆက်သွယ်ပါ။.
• အောက်ပါဖော်ပြချက်အတိုင်း, Google နှင့် Apple သည်အချို့ App များသို့ဝင်ရောက်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်မိဘများလုပ်နိုင်သောဆက်တင်မျိုးကိုထည့်ပေးထားသည်။ သင့်ကလေး၏အက်ပ်အကြောင်းအရာများအားဝင်ရောက်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်သင့်အားခွန်အားပေးမည့်ဆက်တင်များအပိုင်းအခြားများနှင့်သင်ရင်းနှီးရန်သင့်အားတိုက်တွန်းသည်။
• Google Fire နှင့် App Store မှ Free Fire ကိုသင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။
• ၄င်း ပလက်ဖေါင်း2ခုစလုံးသည် အသက်အရွယ်နှင့်အတူဝယ်ယူခြင်းအသုံးစရိတ်ကန့်သတ်ထားသည်
• • Iphone အသုံးပြုသူများအတွက်
• Android သုံးတဲ့လူတွေအတွက်
အကယ်လို့ကျွန်ုပ်ကလေးသည်အသက်မပြည့်သေးပါ ဒါပေမယ့် Free Fire ကစားချင်ပါသည်၊သူကစားနိုင်ပါ သလား ?
• ကျွန်ုပ်တို့ Free Fire မကစားမှီမိဘများသည် ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ဆောင်မှုစည်းကမ်းကိုသဘောတူရန်လိုအပ်သည်။
• ဒါ့အပြင်၊ မိဘတွေအနေနဲ့ကလေးတွေဘာကစားနေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့၊ အွန်လိုင်းမှာလုံခြုံပြီး
• မိဘများသည်၎င်းတို့၏ကလေးများအားသူတို့၏အွန်လိုင်းအမူအကျင့်အကြောင်း၊ အွန်လိုင်းတွင်ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များနှင့်အွန်လိုင်းတွင်သူတို့ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်အခြားမည်သည့်ပြသနာများကိုမဆိုတိုင်ပင်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်။
• သင်၏ကလေးနှင့်ကျန်းမာသောဆွေးနွေးမှုရရှိစေရန်အတွက်, ESRB မှဤလမ်းညွှန်ကိုအကြံပြုလိုသည်: https://www.esrb.org/about/familyguide.aspx
Free Fire app တွင်ကျွန်ုပ်၏ကလေးဝယ်ခြမ်းထားမှုနှင့်မေးခွန်းမေးလိုသည်.မည်သူ့ကိုဆက်သွယ်ရမည် နည်း?
ခွင့်ပြုချက်မရှိသောဝယ်ယူမှုများမေးရန်, ပြန်အမ်းငွေ, etc. အသေးစိတ်ကို အထောက်ပံ့စာမျက်နှာ သို့ပို့ပေးပါ
သင်၏ကလေးသည် Free Fire အတွင်းမသင့်လျော်သောစကားပြောဆိုမှုများပြုလုပ်နေပါကသင်အဘယ် အရာပြုလုပ်နိုင်သနည်း?
• အသုံးပြုသူများအား in-app အစီရင်ခံခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များမှတဆင့်မည်သည့်မသင့်လျော်သောအပြုအမူကိုမဆိုအစီရင်ခံရန်အကြံပေးသည်, ကျွန်ုပ်တို့လူမှုရေးပလက်ဖောင်း သို့ အသေးစိတ်ကိုအထောက်ပံ့စာမျက်နှာ သို့ပို့ပေးပါ။
• ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုစီရင်ခံစာများကိုလိုအပ်လျှင်, ဂိမ်းမှပိတ်ခံထားရသောကစားသူအပါအဝင်အရေးယူမည်။ တရားမ၀င်၊ လိမ်လည်မှု၊ နှောင့်ယှက်ခြင်း၊ အသရေဖျက်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းသို့မဟုတ်အနိုင်ကျင့်ခြင်းအတွက်သုံးထားသောတရားဝင်အာဏာပိုင်များထံရည်ညွှန်းသောမည်သည့်အကောင့်ကိုမဆိုပါဝင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ Free Fire အကောင့်အချက်အလက်များကိုမည်သို့လုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းနိုင်မည်နည်း ?
• သင်၏လော့အင်အသေးစိတ်ကိုမည်သူနှင့်မျှမျှဝေပါနှင့်, Garena ဝန်ထမ်းအပါအဝင်, မိဘသို့သူငယ်ချင်းများ. သင့်အကောင့်ဝှက်စာသည်သိုဝှက်ထားရမည်.
• သင်၏ရှုပ်ထွေးသောစကားဝှက်ကိုသတ်မှတ်ပြီး၎င်းကိုမှန်မှန်ပြောင်းသင့်သည်. ခိုင်မာသောစကားဝှက်တွင်အောက်ပါလက္ခဏာများရှိသည်:
• သင့်ကိုယ်ပိုင်နာမည် နှင့် အသုံးပြုအမည်မထည့်ပါနှင့်.
• အနည်းဆုံးစာလုံး 8 လုံးရှိရမည်.
• နံပါတ်များ, သင်္ကေတများ (e.g. !@#$%^&*), စာလုံးကြီးနှင့်စာလုံးအသေး
• လိမ်လည်သူများသည်အဖိုးတန်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ကိုအမြဲစောင့်ကြည့်နေသည် (ဥပမာအကောင့်စကားဝှက်များ၊ ခရက်ဒစ်ကဒ်နံပါတ်နှင့် PIN နံပါတ်)
• သင်၏အချက်အလက်များကိုသင်မည်သူနှင့်ဝေမျှသည်ကိုသတိပြုပါ၊ ဤအကြံပေးချက်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်သင်၏အကောင့်ကိုလုံခြုံအောင်ထားပါ:
• ဖုန်းမကိုင်သင့်, အီးမေးလ်, သို့ မက်ဆေ့ခ်ျများ ကိုယ်ပိုင်လော့အင်တောင်းဆိုမှု သို့ ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာ, သင်၏ဝှက်စာကဲ့သို့, တစ်ခါသုံးဝှက်စာ (OTP), ခရစ်ဒစ်ကဒ်အချက်အလက် နှင့်လူမှုရေးလုံခြုံမှုနံပါတ်. Garena သည်သင်၏လော့အင်အချက်အလက်ကိုဘယ်တော့ခါမှဖုန်းခေါ်မပြောပါ, SMS, အီးမေးလ်, ဂိမ်းတွင်းချက်တင်, သို့ အခြားမက်ဆေ့ဝန်ဆောင်မှု.
• မလုံခြုံစိတ်ချရသောကွန်ရက်များ (ဥပမာအများသုံးဝိုင်ဖိုင်) သို့မဟုတ်အများသုံးကွန်ပျူတာများတွင်အရေးကြီးသောအချက်အလက်များမထည့်ပါနှင့်။ ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်သားများသည်ဤလမ်းကြောင်းများကိုကြားဖြတ်ဖမ်းယူနိုင်ပြီးသင်၏အချက်အလက်များကိုရယူနိုင်သည်။
• မသင်္ကာဖွယ်သူများမှပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များစုဆောင်းရန် phishing siteတစ်ခုဖြစ်နိုင်သောချက်များ (သို့) အီးမေးလ်များတွင်သံသယဖြစ်ဖွယ်လင့်ခ်များကိုမနှိပ်ပါနှင့်။
• သင်၏ပတ်စ်ဝေါ့ထားရှိပါ, ပိုက်ဆံအိတ် PIN နှင့် OTP သီးသန့်ထားပါ. သံသယရှိလျှင်, Garena သို့ဆက်သွယ်ပါ။ ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ။.
• လုံခြုံသောကွန်ယက် (ဥပမာသင်၏ကိုယ်ပိုင်မိုဘိုင်းဖုန်းကွန်ယက်၊ အိမ်သုံး wifi)တို့၌အရေးကြီးသောအချက်အလက်များထည့်သွင်းခြင်း (ဥပမာသင်၏ပိုက်ဆံအိတ်လက်ကျန်ငွေထုတ်ယူခြင်း) ပါဝင်သောအရောင်းအ၀ယ်များကိုသာလုပ်ဆောင်ပါ။
တစ်စုံတစ်ယောက်သည် Free Fire မှတဆင့်လိမ်လှည့်နေသည်ဟုယုံကြည်ပါက ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်သင့်သလဲ ?
• လိမ်လည်သူသည်သင်၏အကောင့်ကိုဝင်ရောက်နိုင်ရန်ခိုးယူခြင်း (သို့မဟုတ်သင့်အားလှည့်စားထုတ်ဖော်ခြင်း) သင်၏အရေးကြီးအချက်အလက်များဖြစ်တဲ့ စကားဝှက်များနှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်အချက်အလက်များကဲ့သို့အားထုတ်ဖော်ရန် ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
• အီးမေးလ် / SMS / မက်ဆေ့ခ်ျများ လိမ်လည်ခြင်းအောက်ပါပုံစံရှိသည်:
• သင်၏ credit card နံပါတ်ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ငွေကြေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များတောင်းခံခြင်း
• "Dear User" ကဲ့သို့ယေဘုယျစကားသုံးခြင်း
• မည်သို့ဆိုစေကာမူ, လိမ်လည် အီးမေးလ်အားလုံး / SMS / မက်ဆေ့ခ်ျ ယခုလိုပုံစံရှိမည်, အဲ့ဒာကြောင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်လက်ါ သို့ငွေကြေးဆိုင်ရာအချက်များကို ထိုလိုင်းများမှသုံးခြင်းဂရုပြုပါ.
• သင်လိမ်လည်ခံနေရသည်ဟုသံသယရှိပါက, ဤနေရာတွင် ဆက်သွယ်ပါ.